Posted on September 23, 2021 September 23, 2021 .by San Aung.Posted inLaw, Real Estate. No comments yet	.
#၄။ သေတမ်းစာပစ္စည်းရှင် သေဆုံးသည့်အခါ ၄င်း၏ပစ္စည်းများကို မည်သို့မည်ပုံ စီမံခန့်ခွဲလိုကြောင်း တရားဝင် ကြေညာချက်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် သေတမ်းစာရေးခွင့်မရှိ။
#၅။ ရုံးခွန် နှင့် အမှုတန်ဖိုးတရားလို အမှုတန်ဖိုးကို မိမိသဘောအတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်သလို သက်မှက်နိူင်သည်။ အမှုတန်ဖိုးမှာ တရားလို၏ ဝေစုတန်ဖိုး ဖြစ်ရမည်။ ရုံးခွန်ကိုလဲ မိမိတောင်းခံသော အမွေဝေစုအပေါ် ထမ်းဆောင်ရမည်။
#၁၄။ အမွေနှင့် ကာလစည်းကမ်းသက်၁။ အမွေပုံပစ္စည်းသည် မရွှေ့မပြောင်းနိူင်သော ပစ္စည်းဖြစ်လျှင် ၁၂ နှစ်တွင်း တရားစွဲရမည်။၂။ အမွေပုံပစ္စည်းသည် ရွှေ့ ပြာင်းနိူင်သော ပစ္စည်းဖြစ်က ၆ နှစ်တွင်း တရားစွဲရမည်။ ဖခင်ကွယ်လွန်သောအခါ သြရသသသားသည် မိမိအစုကို ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥပဒေ ပထမ ဇယားအမှတ်စဉ် ၁၂၃ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း တောင်းဆိုနိုင်သည် ဟု (ထွန်းသာ နှင့် မသစ် အောက်မြန်မာအတွဲ ၉ စာ ၅၆ (ပီစီ)) အမှုတွင် စီရင်ထုံးဖွဲ့ ထားသည်။ ထိုနည်းတူ ကျန်ရစ်သူမိဘနောက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုသည်ကို အကြောင်းပြုပြီး သားသမီးများက ထိုမိဘထံမှ အမွေတောင်းသော အမှုမှာလည်း အဆို ပါစည်းကမ်းသတ်ကာလနှင့် သက်ဆိုင်သည်၊(၁၉၃၉ ရန်ကုန် ၂၁၇ ဦးတောက်တာ နှင့် မအုန်းရင် ၊ ) သြရသအစုကို ရခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူမိဘ နောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုသည့်အခါ သားသမီးများရခွင့်တို့ သည် ၁၂ နှစ်ကုန်တွင် (ဆိုင်ရာမိဘသေဆုံးချိန်နှင့်ကျန်ရစ်သူမိဘနောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုသည့်အချိန်မှစ၍ အသီးသီးရေတွက်ရန်ဖြစ်သည်၊) ဆိတ်သုန်းသွားသည်၊ ရန်ကုန်အတွဲ ၅ စာ ၁၂၅ ၊ မောင်ကျော်ဇနှင့်ဦးဒေဘီ ၊ ထွန်းသာ စီရင်ထုံးကို ပရီဗွီကောင်စီကပင် ဂူလမ်မိုဟာမက် နှင့် ဂူလမ်ဟူစိန် နှင့် အခြားသူများ (အေအိုင် အာ ၁၉၃၂ ပီစီ ၈၁ ) အမှုတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်၍ မဟာမေဒင်ဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အမွေဆိုင်တစ်ဦး သည် ကျန်အမွေဆိုင်ထံမှ အမွေစုရလို၍ စွဲဆိုသောအမွေပုံကို စီမံခန့် ခွဲပေးစေလိုမှုမှာ ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥပဒေပထမဇယားအမှတ်စဉ် ၁၂၃ တွင် အကျုံးမ၀င်ကြောင်း စီရင်ထုံးဖွဲ့ သည်။ ဂူလမ်မိုဟာမက် စီရင်ထုံး ကို မဖွားသင် နှင့် ဦးညို (ရန်ကုန်အတွဲ ၁၂ စာ ၄၀၉) တွင် ကိုးကား၍ ”အမှတ်စဉ် ၁၂၃ မှာ အမွေထိန်း သို့ မ ဟုတ် အမွေပုံကို ခွဲဝေပေးရန် ဥပဒေအရ တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူအပေါ် တရားစွဲဆိုသည့်အမှုသာ အကျုံးဝင်ပြီး၊ မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရ အမွေဆိုင်များထံမှ အမွေရရှိရန် စွဲဆိုသည့်အမှုနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိ ” ဟု ထုံးဖွဲ့ သည်၊ မဖွားသင်အမှုမှာ သားသမီးများက ကျန်ရစ်သူမိဘအပေါ် အမွေရလိုကြောင်း စွဲဆိုသောအမှုမျိုး မဟုတ်သဖြင့် ယင်းစီရင်ထုံးမှာ ဟု (ထွန်းသာ နှင့် မသစ် အောက်မြန်မာအတွဲ ၉ စာ ၅၆ (ပီစီ)) စီရင်ထုံးနှင့် ကွဲလွဲဆန့် ကျင်သည်ဟု မဆိုနိုင်ချေ၊ဒေါ်ထယ်ရင် နှင့် ဒေါ်ခွေး (ခ) ဒေါ်ငွေရင် ပါ-၇ (၁၉၇၁ ခုနှစ် တရားမပထမအယူခံမှုအမှတ် ၄၃ ) အမှုတွင် ရရှိသည်၊ကိုချစ်တင်မှာ သြရသသားဖြစ်၍ ဒေါ်ထယ်ရင် နှင့် အကြောင်းပါသည်၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်ကြေးမုံ အမွေရှင်သည် ဦးရွှေကျေးဖြစ်သည်၊ ဦးရွှေကြေးသည် ဇနီးဒေါ်ကြေးမုံနှင့် သားကိုချစ်တင် နှင့် သမီး ၅ ယောက် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဦးရွှေကြေးသည် ဒေါ်ခွေးနှင့်နောက်အိမ်ထောင်ပြုသည်၊ ဦးရွှေကြေးနောက် အိမ်ထောင်ပြုပြီးနောက် သြရသသားကိုချစ်တင်ကသော်၎င်း၊ကနိဌ သမီးများကသော်၎င်း၊ ဖခင်ထံမှအမွေခွဲဝေ ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်း မပြုခဲ့ကြချေ၊၈-၇-၅၈ နေ့ ၌ ကိုချစ်တင်ကွယ်လွန်သောအခါ အမွေစားအမွေခံအဖြစ် ဇနီး ဒေါ်ထယ်ရင် ကျန်ရစ်သည်၊၂-၁၀-၅၈ နေ့ တွင် ဦးရွှေကြေးက ဆန်စက်တစ်စက်တွင် သူ၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို သမီး များအား မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။ ၆-၁၁-၆၃ နေ့ ၌ ဦးရွှေကြေးအနိစ္စရောက်သဖြင့် ဒေါ် ထယ်ရင်က ဦးရွှေကြေး၏သြရသသား ကိုချစ်တင်၏ရပိုင်ခွင့်ကို အမွေဆက်ခံသူအဖြစ်ဖြင့် ဦးရွှေကြေး၏အမွေ ကို စီမံခန့် ခွဲပေးရန် ဦးရွှေကြေး၏ဒုတိယဇနီး ဒေါ်ခွေး၊ခယ်မ ဒေါ်အေးမယ်နှင့်သမီးများအပေါ် ၂၂-၁၂-၆၄ နေ့ တွင် တရားစွဲဆိုသည်၊ မူလရုံးက စည်းကမ်းသတ်ကာလကို အမှတ်စဉ် ၁၂၃ အရ ရေတွက်ရန်ဖြစ်သည်။ထိုအ မှတ်စဉ်အရ အမွေတောင်းဆိုသူသည် အမွေပစ္စည်း၏ဝေစုကို ရသင့်ရထိုက်သည့်အချိန်မှ ၁၂ နှစ်အတွင်း တောင်းဆိုရန်လိုသည်၊သြရသသား ကိုချစ်တင်သည် ဖခင်ဦးရွှေကြေးနောက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုသည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် အမွေဝေစုတောင်းဆိုရန် အခွင့်အရေးရှိခဲ့ရာ ထိုသို့ ရရှိသည့်အချိန်မှ (၁၂) နှစ်အတွင်း တောင်းဆို ခြင်းမပြုခဲ့သဖြင့် စည်းကမ်းသတ်အချိန်ကျော်လွန်နေပြီဟု ဆုံးဖြတ်သည်၊
#၁၅။ တရားလိုကုန်ကျစရိတ်များ တရားရုံးက ကုန်ကျစရိတ်များကို အမွေပုံမှ ကျခံရန်ဖြစ်သည်၊#၁၆။ အခြားအမွေဆိုင်အတွက် အမွေခွဲဝေပေးခြင်း၊ တရားပြိုင်ထဲမှ အမွေဆိုင်တစ်ဦးဦးသည် မိမိရသင့်သောအစုကို ရလိုလျင် ရုံးခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်။၁၉၃၉ ရန်ကုန် ၁၃၄ ၊ ဦးဖိုးမြ နှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ရီရီအိုဖရက်
Credit to original uploder #myanmarmegproperty #realestate #law #lawfirm
Previous post: ဂရန်မြေဝယ်ပြီးရင်အခွန်ဆောင်ပြီး အမည်ပြောင်းချင်လို့ဂရန်မြေ ကို ဝယ်ယူရျ် အမည်ပေါက်အထိ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်
Next post: သင့်ကား အင်ဂျင်ဝိုင်လဲတဲ့အခါ သတိထားသင့်တဲ့ အချက် (၃) ချက်